Adesua A Âtô So Nnan
MMERÂ AHODOÔ PÔTEE BI NE DEÂ
ÂDA ADI WÔ ONYANKOPÔN TIRIMPÔ MU –Onyankopôn Tirimpô yâ Fann ne Pâpââpâ
–Mmerâ Ahodoô Pôtee Mmiânsa
Bi A Âfa Wiase Abakôsâm Ho
–Deâ Âda Nsono Wô Âmu Biara Ho
–”Wiase Bâwô Hô Afebôô”
–Wiase A Âbâba, Ôsoro Ne Asase Foforô
–Saa Mmerâ Ahodoô Pôtee Mmiânsa
–Nnoôma A Âdi Mu Wô Onyankopôn
Tirimpô No Mu A Ada Adi
–Nnoôma Nnidisoô A Yâahunu
No Da Biakoyô Adi
–Kwanpa A Wôbâfa So Akyekyâ
Nokwasâm No Mu.
with men are not haphazard Sâdeâ ebinom nnim nimdeâ ne nyansa a ôdansifoô kunini bi wô na âma wôkasa tia no wô n’adwuma bi a ônwiieâ ho no, saa ara nso na seesei nnipa binom nnim na wôkasa tia Onyankopôn wô ne nnwuma bi a ônwiieâ ho; nanso berâ pa mu no sâ ôyi bône ntoatoasoô a wama ho kwan nam so bâsakra ôdasani, a awiieâ no ôbâtwam ama âso aba no mfasoô no firi hô na ôhye bône ase a, âhô na Onyankopôn nnwuma a wayâ awie no bâda ne nyansa ne ne tumi a ânni kabea no adi; na ôdasani bâhunu sâ n’animuonyam-su ne ne tirimpô no siaa so.
Âsiane sâ Onyankopôn akyerâ yân sâ ne tirimpô yâ fann, na ne nyinaa nso bâwie pâ yô nti, Âsâ sâ yâ yâ ne mma yi, yâde nsiyâ bisa hunu tirimpô pôtee a ôwô na yâatumi adi so. Hyâ sâdeâ Yehowa si ne botaeâ a ânhinhim no so dua no nso:
“Asafo Yehowa aka ntam, ôse, Ampa ara sâdeâ masusu no saa ara na âbâba mu; na sâdeâ mabô me tirim no âbâgyina.”
“Asafo Awurade abô ne tirim, hwan na ôbâma no ayâ ôkwa?” Mene Onyankopôn, na obiara nni hô bio; Mene Onyankopôn na deâ ôte sâ me nni hô bio, . . . . . . Me tirimpô bâgyina,  Na deâ âsô m’ani nyinaa mâyô: . . . Aane, makasa na mâma no aba mu; madwene ho na mâyô.” (Isa.14:24-27; 46:9-11)
Yei nti sâdeâ Onyankopôn ne ôdasani ntam nkutahodie teâ biara no, sâ âyâ basaa anaa ahintasâm, deâ âsâ sâ wôn a wôdi N’asâm no ho adanseâ no hunu ne sâ Onyankopôn tirimpô a âfiri tete na ântumi nsesa da no, te saa ara na âgu so rekô so pâpââpâ kôsi sâ âbâwie pâ yô.
Isaiah 60:2 Âsiane sâ nnipa dôm no ara nnim sâ wôte sum mu rebubu fa so nti no, âsâ sâ wôtwân kôsi sâ Onyankopôn tirimpô pôtee no bâda adi, ansa na wôbâte Onyankopôn Onimuonyamfoô Ôdansifoô no su ase yie, âyâ adom ma Onyankopôn ba sâ ônam gyidie ne ne hann so bâhunu animuonyam a wahyâ ho nkôm sâ âbâ ba daakye, na ânam so ama wate ahintasâm a atwam ne deâ ârekô so no ase yie.
Yei nti, sâ yâyâ Onyankopôn mma a yâdô no na wahyâ yân adedie bi ho bô no, âsâ sâ yâdi yân Agya asâm so na ama yâate ne botaeâ ne ne nhyehyââ a âwô ne tirimpô a ôde ama yân no ase.
Yei mu no, yâbâhunu sâ Onyankopôn tirimpô a âfa ôdasani ho no, wô mmerâ pôtee mmiânsa bi mu, âfiri berâ a ôhyââ aseâ bôô ôdasani de kôsi daakye a ânni awiieâ. Saa mmerâ ahodoô yi na Petro ne Paulo ka ho asâm sâ âyâ “Wiase Mmiânsa” no, yei na yeakyerâ no wô mfoni a âdi soô yi mu no.
2 Peter 3:6 Saa mmerâ mmiânsa pôtee yi gyina hô ma Onyankopôn nsiesie pa sononko a ôwô ma ôdasani. Deâ âdi kan no, âfiri wiase ahyâase kô si  nsuyire berâ so a na Ôsoro abôfoô na na biribiara hyâ wôn nsa, na saa berâ yi na Petro kyerâ sâ âyâ
“WIASE A NA ÂWÔ HÔ.” 2 Pet. 3:6
Galatians 1:4 Berâ pôtee a âtô so mmienu no, âfiri nsuyire berâ no akyi kôsi berâ a Onyankopôn ahennie no bâba, na âhyâ ôbonsam a ôyâ “wiase yi so hene” a ne tumi wô awiieâ no nsa, ne saa nti yâfrâ no”
ÂNNÂ WIASE A BÔNE AHYÂ MU MA.” Gal.1:4; 2 Pet. 3:7
Hebrews 2:5 Deâ âtô so mmiânsa no bâyâ “wiase a ânni awiieâ.” (Isa.45:17) na âno deâ Onyankopôn na ôbâdi so, âno ne Onyankopôn ahennie, na wôfrâ no
“WIASE A ÂBÂBA– a teneneeyô ahyâ mu ma.” Heb.2:5; 2 Pet. 3:13
1st 2nd 3rd Berâ a âdi kan anaa “wiase” a na âhyâ ôsoro abôfoô nsa no yââ ôkwa; deâ âtô so mmienu a âhyâ Ôbonsan, ôsisifoô nsa no yâ “wiase a bône ahyâ mu ma” mapa; na deâ âtô so mmiânsa no bâyâ berâ a teneneeyô ahyâ mu ma na âde nhyira aba wôn a wôbâtena asase so nyinaa so.
Death Bed “Wiase” mmienu a âdi akyire no na yâtaa ka ho asâm, na deâ yâka wô âmu biara ho no bô abira koraa. Yâfrâ wiase anaa deâ âtô so mmienu no sâ “Ânnâ wiase a bône ahyâ mu ma,” ânyâ sâ ôbrapa biara nni mu, na mmom wama ho kwan ma bône di akotene wô mu.
“Na afei yân deâ yâbu ahantanfoô sâ ahotôfoô; aane, wôn a wôdi abônefosom no, wôn ase atim, aane, wôn a wôsô Onyankopôn hwâ, wôfiri mu firi nso.” (Mal. 3 : 15).
Yâfrâ wiase anaa berâ a âtô so mmiânsa no sâ “WIASE A ÂBÂBA – a teneneeyô ahyâ mu ma,” ânyâ sâ bône biara renkô so wô mu na mmom bône ntumi nni mu akotene. Wôde mfie apem a âdi kan no na âbâtu bône ase nkakrankakra. Bône ntumi nkô so saa berâ no; ânnya nkôsoô bio; na atirimuôdenfoô nnya ho mfefâ bio; na mmom
“ôteneneeni bâyâ frômm” (Psa. 72:7) na
‘ôsetiefoô nko ara na ôbâdi asase no so nnepa” (Isa 1:19), na
“wôbâtwa nnebôneyâfoô agu.”
Stoning of Steven Yei ma yâhunu sâ, mmerâ a âbâba no bâyâ sononko na âne ânnâ mmerâ yi bâbô abira wô akwan hodoô nyinaa mu. Yân Awurade asâm kyerâ deâ nti a âsâ sâ  Nsonsonoeâ bâda ânnâ mmerâ ne daakye deâ no ntam.
Âfiri sâ mmerâ a âbâba no mu deâ, ôno Awurade na ôbâdi soô anaa ôbâyâ so hene, na âmu no, teneneeyô ne nokorâ bâkô so; na seesei no, âsiane sâ ôbonsam na ôdi ânnâ wiase a bône ahyâ mu ma yi so nti, bône kô so na awurukasâm yâ frômm.
Yei nti na Yesu kaeâ sâ, na me deâ, asase yi so sodifoô no “nni me ho dô biara” – saa ara nso na ônni m’akyidifoô ho dô na mmom, sâ ôbâsôre atia wôn, asô wôn ahwâ, ahyâ wôn abufuo na wabobô wôn (John 14:30; 2 Cor. 12:7) yei nti obiara a ôde kronkronyâ bâtena ânnâ wiase anaa berâ a bône ahyâ mu ma yi mu no, bâhyia ôtaeâ, na atirimuôdenfoô deâ wôbâyâ frômm te sâ dua a anya asiiâ pa. 2Tim. 3:12; Psa. 37:35
Yesu kaeâ sâ, “M’ahennie nyâ asase yi so ahennie,” na ânkôsi sâ saa berâ no anaa “wiase a âbâba no” bâba no, Kristo ahennie no renni wiase yi so. Yei nti na ôkyerâ yân sâ, yânnya anidasoô na yân mmô mpaeâ sâ, “W’ahennie mmra, deâ wopâ na ânyâ hô wô asase so.”
Ôbonsam ne “wiase yi mu esum so sodifoô,” ne saa nti na “esum kata asase so na âsane kata asase yi so nnipa so.” Seesei wôn a wôapirim wôn akoma na wôyâ asoôden no akoma mu na ôte, na âhô na ôdi ne dwuma. Eph. 2:2; 6:12
Ôdansifoô kunini no wô atirimpô pôtee bi fa ôdasani nkwagyeâ ho a ânnya nsii pi – sâ ânte saa a anka wada ôhene foforô ne mmerâ foforô no adi dadaada sâ âyôeâ a wôtwe sensân de twân berâ pa no, ne kwan a âbâfa so asesa afiri ânnâ bône wiase a ôbonsam di so de akô teneneeyô a Kristo bâdi so, no yâ nsâm a âsom bo a âbâda adi akyire yi wô nwoma yi mu.
Seesei deâ yântumi nka sâ, seesei yâ berâ pa sâ wiase yi mu ahennie ahodoô a âhyâ ôbonsam nsa no bâyâ yân Awurade ne ne Kristo dea (Rev.11. 15)
Âda adi pefee sâ, saa nsesaeâ yi bâwie pâ yô wô ahohiahia berâ mu. Yei na Yesu hwââ ho kaeâ sâ, “Na obi ntumi nkô ôhoôdenfoô fie nkôsâe n’afideâ gye sâ ôkyekyere 
Ôhoôdenfoô no kane ansa na wasâe ne fie nnoôma.” (Mark 3:22-27)
Yei nti na wôakyerâ yân sâ, yânni kan nkyekyere ôbonsam, yânnsi no kwan na yânntu no adeâ so ansa na Kristo teneneeyô ne asomdwoeâ ahennie no adi mu. Wôada kyekyere a wôbâkyekyere ôbonsam no, adi sâ âno ne adwuma a âdi kan a wôbâyâ wô mmerâ foforô no mu. Rev. 20:2
Âsâ sâ yâhyâ no nso sâ asase yi yâ “wiase” ne mmerâ ahodoô yi nyinaa ahyâaseâ, na âwô mu sâ mfirinhyia bebree bâtwam na mmerâ asesa deâ, nanso asase bâkô so atena hô –
“Asase deâ âtim hô dabiara.” (Eccl.1:4).
Yei ho na Petro hwâ de frâ saa mmerâ ahodoô yi sâ Ôsoro ne asase sononko. Sâ yâka Ôsoro ho asâm wô ha a, na âgyina hô ma sunsum mu tumi a âkorôn, saa ara nso na sâ yâka Asase ho asâm wô ha a, na âgyina hô ma ôdasani amammuo ne asetenam nhyehyââ.
Yei kyerâ sâ Ôsoro ne asase a na âdi kan no anaa nnoôma nnidisoô ne nhyehyââ a na âwô hô saa berâ no, dii ne dwuma bâsii nsuyireberâ no. Nanso Ôsoro a yâhunu yi (Ewiem ne Ahunum) ne asase a yâte soô yi deâ, antwam ankô: âtenaa hô. Saa ara nso na ânnâ wiase yi (ôsoro ne asase) de dede, egya ne nnanneâ — basabasayô, ôhaw ne ahennie-ntuguo bâtwam akô.
Nanso ôhoôdenfoô no (Ôbonsam) a wôakyekyere no no bâpere sâ ne nsa bâsan aka ne tumi no bio. Ânnâ mmerâ yi mu nnoôma nnidisoô anaa amammuo ne sâdeâ emu nnipa nhyehyââ teâ, a ânyâ ewiem ne asase a yân ani tua yi, nyinaa bâtwam akô. Âsâ sâ ânnâ mmerâ yi mu ôsoro a yâhunu yi (honhom mu a tumfoô tumi) ma “Ôsoro Foforô” – a Kristo honhom bâdi so no kwan.
Na ânnâ wiase (a ôbonsam nam ne tumi so aboaboa emu nnipa ano) wô Awurade mmaeâ ahyâaseâ a âbâdô te sâ fononoo mu no, bânane na wôatu agu. (Mal.4:1)
Na asase foforô a âno ne deâ wôahyehyâ ama âne ôhene – Kristo deâ siaa soô no na âbâhyâ anan mu. Na sâ ânnâ mmerâ yi mu nhyehyââ firi hô ma ahennie foforô a ne nnyinasoô ne atântenenee bâhyâ anan mu a, teneneeyô, asomdwoeâ ne ôdô na âbâdi akotene wô nnipa ntam. 
Isle of Patmos Wôdaa mmerâ a âbâba no kakra adi kyerââ Paul, anaa sâdeâ ôno ankasa too din no “Wiase a âbâba”. Ôse na ayâ te sâ “anisoadehunu bi” (sâ âyâ aniso, adwenem anaa ne mmienu nyinaa deâ ôntumi nkyerâ, na ôhunuu no pefee) firi berâsantene de bâsi seesei tebea mu, “Ôsoro foforô” no merekyerâ “Ôsoro a âbâtô so mmiânsa no.” Na ôhunuu sâdeâ sâ Kristo Honhom Tumi bâdi Hene a nnoôma bâsi ayâ – Ahintasâm a ânyâ adeâ a ôbâda no adi. (2 Cor. 12:2-4)
Âda adi pefee sâ saa anisoadehunu yi ara na Yohane hunuu no akyire yi, na wômaa no ho kwan sâ ônka nkyerâ asafo no wô abâbuo kwan so no, na gye sâ berâ no so ansa na wôbâte aseâ.
Anisoadeâ a yân Awurade daa no adi kyerââ Yohane wô “Patmo Supô” so no, ônyaa anisoadehunu de bâsii ânnâ Kristosom berâ yi so ne Asafo ne Ôman mu nsakraeâ ahodoô so de kôsi ânnâ wiase anaa mmerâ a bône ahyâ mu ma yi mu; na anisoadehunu yi mu no, ôhunuu sâ wôakyekyere ôbonsam, na Kristo redi hene, na kane Ôsoro ne Asase no atwam ama Ôsoro foforô ne Asase foforô no adi mu. (Rev.21:1)
Mfirinhyia Anaa Berâ Pôtee Ahodoô
Seesei deâ yâhunu mfirinhyia a wôakyekyâ berâ pôtee ahodoô akô mu no sâdeâ âte ara pâ wô mfoni a âwô aseâ ha no mu.
Age Ages to
and has no end Saa berâ pôtee yi (wiase ahodoô) mu deâ âdi kan no deâ, wôankyekyâ mu. Kwan a na Nyankopôn fa so ne adasamma di nkutaho no deâ wôansesa no kwan biara so – âfiri Adam ahweaseâ de kôsi nsuyireberâ no.
Nyankopôn de ne mmaransâm a watwerâ no wô ne sâso no maa nnipa; nanso akyire yi a ôdasani yââ bône no, Nyankopôn gyaee ne pâ mu maa no, saa ôpâ a ôgyaee mu maa no no maa no hwee ase maa ôyââ “bône ntoatoasoô” Âbaa no sei sâdeâ âbâyâ a adasamma  bâhunu ne mfomsoô, na ama Nyankopôn Nyansa a âhia Osetie mapa no ada ne ho adi.
Saa berâ pôtee yi to twaa wô nsuyire a âfaa adasamma nyinaa maa âkaa Noah nokwafoô ne n’abusua nko ara no berâ so. Na berâ pôtee a âdi kan no anna ne ho adi sâ bône so wô akatua nko ara na mmom âdaa adi nso sâ bône ma nnipa hwe ase ma ne werâ ho ne ho, na afei âkyerâ sâ sâ adasamma nsa bâtumi asane aka deâ wôhwereeâ – sâ adasamma tebea a na wôwô mu kane no bâtumi asane adi mu a, ânneâ na wôhia Yehowa ntamgyinafoô no.
Mfirinhyia mmiânsa na aka abôm ayâ mmerâ pôtee a âtô so mmienu anaa “wiase a âwô hô seesei no” Na yei mu biara yâ Nyankopôn tirimpô a ônam so bâtu bône ase. Âyâ nnidisoô nnidisoô, emu biara so sene deâ âdi hô. Na âde tirimpô no kô kan ara ma âbân awieeâ.
Mfirinhyia apem anaa “berâ a wôbâsan de biribiara asi n’anan mu bio;” ne deâ âdi akyire no a âyâ “mfeâ a âbâba;” ne deâ âbâsisi a wônnaa no adi no, ka mmerâ pôtee a âtô so mmiâns – Wiase a âbâba no – deâ âbâba Kristo mmaeâ a âtô so mmienu no akyi no ho.
Ânnâ mmerâ yi mu adiyisâm no da ôgyeâ a ôdasani repre agye ne ho afiri bône mu no adi, na ânyâ mmerâ santen mu animuonyam a ôbâdi akyire.
Jewish Age Mfirinhyia a âdi kan a âwô “Wiase a âwô hô yi mu” no, yâfrâ no TETE AGYANOM MMERÂ anaa mmerâ pôtee bi, âfiri sâ saa mmerâ no mu no, na Onyankopôn ne nnipakuo kumaa bi na âdi nkutaho a na n’adom wô wôn so, na dodoô a aka no deâ na wapo wôn. Wôn a n’adom no wô wôn so no ne yân Nana Noah, Abraham, Isaac ne Jacob. Yâhunu sâ na Onyankopôn adom wô yeinom biara so.
Jacob wuo akyire no, saa mfirinhyia anaa Onyankopôn ne ôdasani ntam nkutahodie no to twaeâ. Berâ a Jacob wuiiâ no, na n’asefoô a âdi kan no, wôfrâ wôn “Isreal Mmusuakuo Du-mmienu,” na Onyankopôn kaa wôn bôm sâ ne “mamfoô sononko,” na ânam wôn afôrebô so nti na wôyâ “Ôman kronkron” a wapaw wôn asi nkyân sâ Ôman sononko wô aman a atwa wôn ho ahyia no mu, âsiane botaeâ pôtee bi nti, yei nti na wônya ôdom sononko.
Mmerâ a âda Onyankopôn tirimpô yi adi a, âhyââ aseâ firii ha de kô si Kristo Wuo berâ mu no, yâfrâ no YUDAFOÔ MMERÂ anaa  Mmaransâm mmerâ no.
Saa mmerâ no mu no, Onyankopôn hyiraa saa Ôman no sononko. Ôde ne mmaransâm no maa wôn; ône wôn yââ apam sononko; ôde apam adaka a Shekinah animuonyam wô mu a âkyerâ sâ Yehowa Kronkroni ka wôn ho sâ wôn kandifoô ne wôn hene no maa wôn.
Ôsomaa adiyifoô baa wôn nkyân na akyire yi no, ômaa ne ba-barima nso baa wôn nkyân. Yesu yââ anwanwadeâ wô wôn mu na Ômaa wôn nkyerâkyerâ, na Ôno ankasa deâ wankô afoforô nkyân na wamma n’asuafoô no kwan ma wôankô aman a atwa wôn ho ahyia no nso mu.
Yesu somaa wôn na ôhyââ wôn sâ
“Mma mo mmane mfa amanfrafoô kwan so, na mo nnhyâne samariafoô kuro biara mu; na mmom mo nkô Isrealfie nnwan a wôayera no nkyân.” (Matt. 10:5,6)
Na ôhyââ wôn bio sâ,
“Na Isrealfie nnwan a wôayera no nko ara nkyân na wôsomaa me.” (Matt. 15:24)
Ôdom a âwô Ôman no so no to twaa wô berâ a wôpoo Yesu sane bôô no asândua mu no, yei da adi wô Yesu nsâm a ôkaeâ wô nna nnum akyi ansa na wôrebô no asândua mu, sâ,
“Wôbâgya mo fie fituo ama mo.” Matt. 23:38
Gospel Age Yesu wuo berâ mu no, mfirinhyia foforô hyââ aseâ – KRISTOFOÔ BERÂ anaa ASÂMPAKA BERÂ, na âno mu no, âsâ sâ wôpae mu ka nnoôma a âho wô adasamma mfasoô, ânyâ sâ Yudafoô nko ara na mmom amansan nyinaa; âsiane sâ ânam Onyankopôn adom so na Yesu Kristo wu maa ôdasani biara.
Wô ânnâ asâmpaka berâ yi mu no, nnipakuo bi wô hô a, wôwô ôdom sononko, na wôn deâ wôahyâ wôn bô sononko; saa nnipa yi ne wôn a wônam gyedie so agye Yesu Kristo sâ wôn Agyenkwa ne wôn Awurade na wôdi n’ananmôntuo akyi.
Asâmpatrâ no akô so wô asase yi so firi tire dekô tire bâyâ sâ mfirinhyia apem ne ahankron nie, na yei nti, yâbâtumi aka sâ asâmpa no deâ wôaka wô aman nyinaa so.
Asâm no ntumi nsakraa adasa – ânyâ saa na Awurade hyââ sâ ânyâ wô ânnâ berâ yi mu; na mmom, wapa wôn mu bi a wôn ne “Nnwankuo Ketewa,” sâdeâ Yesu hyââ ho nkôm berâ bi no (Luke 12:32) sâ âbâyâ Agya no fâ sâ ôde n’ahennie no bâma wôn wô nna a âdi akyire no mu. 
Na saa mmerâ yi – “Ânnâ Wiase a bône ahyâ mu ma” no to bâtwa; na hyâ no nso yie sâ, berâ a ayâ sâ Onyankopôn ama bône ho kwan ama abunkam afa wiase so, sâdeâ ârebâsâe ne botaeâ no, na n’atirimpô a âmu dô yie no rekô so pâpââpâ sâdeâ wahyehyâ no ara pâ, na saa ara na watoto no nnidisoô- nnidisoô ama ne berâ a wahyehyâ ato hô.
Saa mmerâ a yâwô mu yi awieiâ a ôdiadefoô no bâba, a âyâ mfirinhyia apem mu no, wôbâkyekyere ôbonsam na wôagye ne tumi no afiri ne nsam, yei ne Kristo ahennie ne “Wiase a âbâba no,” ahyâaseâ; âmu na teneneeyô ahyâ mu ma.
Millennial Age Mfirihyia apem yi a yâreka ho asâm yi yâ mmerâ a wôka ho asâm wô Adiyisâm 20:4 hô no – sâ, mfirinhyia apem a Kristo bâdi hene, a âyâ berâ a âdi kan wô “Wiase a âbâba” no mu. Wô saa mfirinhyia apem yi mu no, nnoôma a ânam Adam asehweâ so nti ôdasani hweree no, (Acts 3:19-21) wôbâsan de ne nyinaa ahyâ ne nsa, na ansa na wôbâtwam no, wôbâpepa obiara aniwam nisuo.
Deâ âka ho bio ne berâ a nhyira ahyâ mu ma, na owuo nni hô bio;awerâhoô anaa osu nni hô bio; na ôyeaa biara nso nnihô bio. Kane nnoôma no nyinaa atwam. (Rev. 21:4) Na Onyankopôn adiyisâm no renna nnoôma titire adi bio, na âhô na yâde bâsi.
Each age has its part to accomplish progressively Âha yi deâ, yâde yân ani abu n’atirimpô a wahyehyâ ato hô wô mmerâ ahodoô no mu. Na berâ dodoô a yâdwendwene ho no, âno na yâhunu ne nsaasoô-pa, ne fâ ne ne nnidisoô a âteâ.
Berâ pôtee biara ne dwuma titire a âbâsie, na âho hia wô Onyankopôn atirimpô no nkôsoô no nyinaa mu. Atirimpô no yâ nnidisoô-nnidisoô, na âde nkakrankakra reda nkôsoô ne kankorô a âwô Onyankopôn Ôdansifoô no pô a wabô ato hô sâ ôbâsâe ne nhyehyââ a wayâ dada no “sâdeâ deâ ôyâ nnoôma nyinaa, ne pâ agyinatuo soô no hyehyâ too hô” no adi berâ-ano-berâ-ano.
so Gods plan appears confusing to an uninformed mind. Saa mmerâ ahodoô pôtee yi mu biara nyâ dônhwere a âware anaa âyâ tia sâ saa botaeâ yi bâwie pâ yô. Onyankopôn yâ mmerâ ne  Akwan hodoô mu ahwâyie ho nyansafoô, âfiri sâ n’ahonyadeâ dôôso boro so; na sâdeâ tumi biara teâ no, ântumi nsi n’atirimpô kwan anaa ânsâe no wô sima baako mpo mu.
Adeâ nyinaa mu no, papa o! bône o!, ne nyinaa Onyankopôn na ôhwâ so, sane di so, na ne nyinaa reyâ adwuma ama ne pâ no adi mu.
Wô obi a ônnyaa nkyerâkyerâ na ônni ahohyâsoô adwene mu no, Onyankopôn atirimpô hwanyann kakra bi pâ a ôhunu no yâ n’ani so sâ, âyâ basabasa, na nteaseâ mpo nni mu na afei, âyâ ôkwa sâdeâ abôfra bâhunu afidie nwanwasoô akwaa bi anaa afidie no nyinaa no.
Afei nso Âsiane sâ n’adwene mu nnôeâ na ônnyaa nkyerâkyerâ biara nti no, ônte aseâ, na sâdeâ afidie no twa ne ho âne âho nhoma no nyinaa yâ hwanyann.
Na osuahunu ne nhwehwâmu bâda no adi sâ saa atirimpô yi a ayâ sâ deâ nteaseâ nni mu yi, siaa so na âho bâba mfasoô. Mpo ansa na abôfra no bâte sâdeâ afidie no yâ adwuma ase no, na âdi mu yie.
Nti sâdeâ Onyankopôn atirimpô teâ, na atena hô mfirinhyia bebree, na âgu so renya nkôsoô no, ôdasani nsa aka ahohyâsoôpa biara a âsâ sâ ônya, sâ ânyâ sâ âbâboa no ama wate nnwuma hwanyan no ase nko ara na mmom sâ ôbânya nhyira a âwô mu nso.
Scriptures that belong to one age, do not always apply to another. Sâ yâgu so resua adeâ fa Onyankopôn atirimpô ho no, âho hia sâ yâbâhyâ saa mfirinhyia ahodoô yi, deâ âyâ sononko wô âmu ho âne ne botaeâ, nso; âfiri sâ âmu biara nni hô a atirimpô no bâda adi wô mu, ne nyinaa mu, âfiri sâ, âpô baako ntumi nyâ nkônsônkônsôn na mmom no apôapô bebree na âyâ nkônsônkônsôn. Yânya nimdeâ pa wô atirimpô no nyinaa ho wô berâ a yârehyâ deâ âbâsi wô âmu biara mu no nso, na yei boa yân ma yâtumi kyekyâ nokwasâm no mu pâpââpâ.
Ânsâ sâ yâfa no sâ deâ Asâmpa no aka afa berâ pôtee anaa mfirihyia bi ho sâ âbâsi wô mu no bâtumi asi wô berâ foforô bi mu, âfiri sâ ânyâ deâ wôaka afa berâ pôtee bi ho no na âbâsi wô berâ foforô mu. Sâ ebia, ânyâ nokorâ sâ yâbâka sâ, ânnâ mmerâ a yâwô mu yi, Awurade ho nimdeâ ahyâ asase so ma, anaa âho nhia sâ obi bâka akyerâ n’afipamfoô sâ, âsâ sâ wôhunu Awurade.  (Isa. 11:9; Jer. 31: 34)
Yei nyâ nokorâ wô saa mmerâ yi mu, na ânyâ nokorâ kôsi sâ, Awurade bâba bio de n’ahennie no bâba; âfiri sâ saa mmerâ a yâwô mu yi, nnaadaa akô so bebree, na yâate nso sâ, wô mmerâ a âdi akyire no –
“ Wô mmerâ a âtwa toô mu no . . . . . . nnipa asisifoô bâkô wôn anim wô bône mu, wôredaadaa nnipa no na wôredaadaa wôn bi.” (2 Tim. 3:1, 13)
Yei bâyâ Mâsiah ahennie no ho nsunsuansoô wô mfirinhyia apem no mu a nimdeâ ne teneneeyô bâhyâ asase so ma sâdeâ nsuo ahyâ âpo mu ma no.
Mfomsoô baako bi âte sei nso ne sâ, ebinom bâsusu sâ Onyankopôn ahennie no abâduru na âredi wiase so, na ne pâ reyâ adwuma wô amanaman so. Yei da adi pefee sâ, âne nokorâ no ntam ware koraa, âfiri sâ asase yi so ahennie ahodoô no nyinasoô ne ne dâ gyina nhyâsoô, asisie ne nnaadaa so de kôsi mpâmpânsoô a nnipa nyansa ma ho kwan.
Ôbonsam a ôyâ “Ânnâ wiase so hene” no, wôbâtu no adeâ so, na saa ahennie ahodoô yi a âhyâ n’ase no abâyâ yân Awurade a wôasera no ngo no dea, na âhô na ôbâfa ne tumi no de adi hene.
Seesei a hann no abâduru agyidifoô fidua mu no, yâtumi te saa nhyehyââ ne nnoôma nnidisoô a wôaka afa Onyankopôn anamôntuo ho a âda hô mfirinhyia bebree a atwam no ase yie, na Cowper anwonsâm a wahyehyâ no fâfââfâ yi hyâ yân ma yânam gyidie so gye Otumfoô Yehowa di:
Ôbâma âmu ada hô fann
“Onyankopôn yâ biribiara wô
ahintasâm kwan so,
Anwanwa dwuma a ôyâ:
Ônante wô âpo so,
Na ôtena asorôkye so.
“Wô amena donkudonku mu
Ôhwâ Ne nyansa a ântô sini no a,
N’ani sô adwinipa a wadie,
Na ôyâ n’adwuma ne tumi mu.
“Mo ahotefoô ahufoô, mo nnya
Saa mununkum a mosuro yi,
Âmu wô ahummôborô kâseâ,
na âde nhyira bâba mo so.
“Mommfa moadwene a âmu
nnô no mmu Awurade atân,
Na mmom, monnyina n’adom
no so nnye no nni.
Abufuo mu Ôma akyi na
ôde sereâ anim no ahinta.
“N’aduaba bâbere ntâm,
Wô dônhwere biara mu.
Âbâtumi aba sâ aduaba no bâyâ nwono
Nanso ne nhwiren no deâ
“Âwô mu sâ gyidihunu b âyâ mfomsoô,
Na wabu n’adwuma sâ âyâ ôkwa
Onyankopôn yâ ôno ara ne
Na ôbâma âmu ada hô fann.”
“Mennim ôkwan a âda m’anim no so,
Sâ anigyeâ anaa apenesie a mâhyia”,
Mununkum bân na âkata daakye so,
Nhwiren bân na âbâfefâ wô kwankyân.
Na obi wô hô a ône ne bâtu kwan yi,
Sâ âyâ apira anaa amanneâ mu no, ônnya me hô;
Na yei ne m’anigyesâm ne m’awerâkyekyerâ,
‘Ônim kwan a menam so.’”